नेपाल आज | के राजकुमार ह्यारीलाई एचआइभी भएको हो ? फोटो सहित
ताजा खबर विदेश समाचार
के राजकुमार ह्यारीलाई एचआइभी भएको हो ? फोटो सहित
शुक्रबार, ३१ असार २०७३ गते प्रकाशित - नेपाल आज
असार ३१ । बेलायतका राजकुमार ह्यारीले एचआइभी परीक्षण गराएका छन् । लन्डनस्थित सेन्ट थोमस अस्पतालमा पुगेर उनले एचआइभी परीक्षण गराएका हुन् । औंलाबाट रगत झिकेको करिब एक मिनेटमै उनको रिपोर्ट आएको थियो । उनको एचआइभी रिपोर्ट ‘नेगेटिभ’ आएको थियो । रिपोर्ट ‘पोजेटिभ’ पाइएमा एड्स संक्रमित भनेर बुझिन्छ ।
राजकुमार ह्यारीले एचआइभी परीक्षण गराएको दृष्यलाई सोशल नेटवर्किङ साइटमा भिडियोमार्फत प्रशारण गरिएको थियो । उनी अस्पताल जानुभन्दा करिब १० मिनेट अघिमात्र सोबारे जानकारी दिइएको थियो । एचआइभी परीक्षण कति सहज छ भन्ने देखाउनका लागि भिडियो पोस्ट गरिएको अधिकारीहरुको भनाइ छ ।
नेपालका भुकम्प पीडित क्षेत्रमा बसेर पुर्ननिर्माणमा खटिएका ह्यारी नेपालमा लोकप्रिय छन् । एचआइभी नरहेको रिपोर्ट देखिएपछि नेपालीले खुःशी व्यक्त गरेका छन् । साथै, जनचेतनाका लागि उनले देखाएको अग्रसरताको प्रशंसापनि भएको छ ।
कोरोनाकाे कहर- विश्वभर ३ लाख ४७ हजारको मृत्यु, ५५ लाख ८६ हजार संक्रमित
कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक प्रदेशसभामा प्रस्तुत, रुकुम पश्चिम घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गर्न